साना प्रतियोगितामा रमाउँदै राष्ट्रिय खेलाडी- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
साना प्रतियोगितामा रमाउँदै राष्ट्रिय खेलाडी
‘साना प्रतियोगिताहरुमा खेल्दा अभ्यास मात्र होइन आम्दानीसमेत हुन्छ । त्यसैले स्थानीय स्तरमा प्रतियोगिता हुनु जरूरी छ ।’
मंसिर १९, २०७७ सुम्निमा चाम्लिङ
इटहरी — कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण खेलक्षेत्र ठप्प हुँदा फुटबल खेलाडीहरू व्यक्तिगत अभ्यासमै सीमित भए । बिहान–बेलुका ट्रेनिङ भए पनि बाँकी दिनभरिको समय फुर्सदिला हुन्थे । खेल्न नपाउँदा दिक्क भएका खेलाडीहरू केही समययता भने साना प्रतियोगिताहरूमा रमाउन थालेका छन् ।
धरान–१७ पटनालीमा मंसिर ५ देखि सुरु भएको प्रथम पटनाली च्यालेन्ज कप २०७७ मा अधिकांश राष्ट्रिय र ‘ए’ डिभिजन स्तर खेल्दै आएका खेलाडी सहभागी भएका छन् । कोरोनाका कारण कामकाज ठप्प भएका कारण दर्शकको सहभागितासमेत उस्तै लोभलाग्दो छ । पाका उमेरदेखि साना केटाकेटी पनि खेल हेर्न पुगिरहेका छन् ।
पहिलो चरणको लकडाउनयता खेल्न नपाएका राष्ट्रिय खेलाडी प्रकाश बुढाथोकी पटनाली च्यालेन्ज कपमा उत्साहसाथ पटनाली क्लबबाट खेले । कोरोनाका कारण लामो समयदेखि प्रकाश घरमै थिए । स्थानीय उनी घरेलु मैदानमा खेल्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताउँछन् । ‘लकडाउनपछि पहिलोपल्ट खेल्न पाउँदा खुसी छु,’ उनले भने, ‘अरू खेलाडीलाई गाउँबारेमा थाहा दिन पाउँदा निकै उत्साही छौं ।’ पछिल्लो केही वर्षदेखि चाहेर पनि साना प्रतियोगिताहरूमा खेल्न पाएका थिएनन् । यसपल्ट भने जहाँबाट फुटबल खेल्न सिके सोही ठाउँमा लामो समयपछि खेल्न पाए ।
राष्ट्रिय खेलाडी बुद्ध चेम्जोङ धनकुटाको राजारानीबाट उत्साहसाथ खेल्न पटनाली आएका थिए । प्रतियोगिता हुने नहुने निश्चित थिएन । तर उनले आफूलाई फिट राख्न व्यक्तिगत ट्रेनिङ नियमित गर्थे । राम्रो प्रदर्शन गरे पनि उनी आबद्ध सतिशाले फुटबल क्लब मोरङ पहिलो चरणबाट बाहिरियो । हार भए पनि मैदानमा खेल्न पाउँदा खुसी लागेको बुद्ध चेम्जोङले सुनाए ।
धरानको बुढासुब्बा गोल्डकपमा करिब एक दशकदेखि खेल्दै आएको भए पनि पटनालीमा खेल्ने मौका पाएका थिएनन् । यसपल्ट भने कोरोनाका कारण उनलाई मौका जुर्‍यो । दर्शकको बाक्लो उपस्थितिले खेल्न निकै हौस्याएको उनको अनुभव छ । प्रतियोगिताहरू ठप्प हुँदा खेलाडीहरू निकै मर्कामा परेको बताउँदै उनले भने, ‘साना प्रतियोगिताहरूमा खेल्दा अभ्यासमात्र होइन आम्दानीसमेत हुन्छ । त्यसैले स्थानीयस्तरमा प्रतियोगिता हुनु जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय खेलाडी जितेन्द्र तामाङ लकडाउनयता घरमा बस्दै आएका थिए । नियमित ट्रेनिङ दिनभरि फुर्सदमा हुने उनलाई पटनालीमा खेल्ने निम्तो दिँदा उत्साह छाएको थियो । झापाबाट खेल्न अर्का राष्ट्रिय खेलाडी विशाल राई ‘बी’ सँगै उनी पटनाली आएका थिए ।‘१० महिनादेखि खेल्न पाएको थिएनौं,’ उनले भने, ‘साना प्रतियोगिता खेलेर भए पनि चित्त बुझाएँ । ट्रेनिङ भइरहे पनि खेलेको जस्तो हुँदैन ।’
प्रकाश बुढाथोकी र पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी सुमन सुवेदीको घर पटनाली भन्ने थाहा थियो । तर पहिलोचोति आएर खेल्न पाउँदा निकै खुसी लागेको उनी बताउँछन् । कोरोनाका कारण खेलाडीहरू निकै समस्या भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘खेलेर कोरोना जितिन्छ । आवश्यक मापदण्ड पुर्‍याए खेल सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।’ लिग सञ्चालन गर्न नसके पनि स्थानीय प्रतियोगिताहरू सुचारु हुन सके खेलाडीमा निकै उत्साह जाग्ने उनले बताए ।
लकडाउन सुरु हुनुअगावै घर आएका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा नेपाल पुलिस क्लबका सुमन सुवेदी अझै पटनालीमा छन् । प्रतियोगिता ठप्प भएपछि काठमाडौं जान नपाएका उनी पटनालीमा भएको खेलमा सहभागी भए । व्यक्तिगत ट्रेनिङ दैनिकजसो भए पनि खेल्न नपाउँदा भने दिक्क भइसकेका थिए । ‘कोठामा खेल्नु र मैदानमा खेल्नु फरक हो,’ उनले भने, ‘खेलाडीहरूसमेत निकै खुसी छन् । दर्शकको सहभागिताले अझ हौसला बढेको छ ।’
सुमन, प्रकाश, पुजन उपरकोटी, स्थानीय किरण थापालगायतले खेल आयोजना गर्ने योजना बनाए । खेल सञ्चालनका लागि स्थानीयले मैदान मर्मत, आर्थिक सहयोगलगायत विभिन्न पक्षमा सक्दो सहयोग गरेका छन् । हुन त यसै पनि पटनालीलाई धरानपछि
दोस्रो धेरै फुटबलर जन्माउने स्थानको रूपमा चिनिन्छ । राष्ट्रिय खेलाडीदेखि ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्ने खेलाडीहरू आधा दर्शन बढी छन् । महिला खेलाडीहरूसमेत उत्तिकै उत्पादन भएको छ । स्थानीयहरू फुटबलका लागि कुनै पनि सहयोग गर्न पछि हट्दैनन् ।
फुटबल आयोजना गर्न स्थानीयको पर्याप्त सहयोग पाएको कारण खेल आयोजना सम्भव भएको पटनाली फुटबल क्लबका संयोजक किरण थापा बताउँछन् । खेल हेर्न सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र मोरङबाट समेत पुग्ने गरेका छन् । विजेताले ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ १२:३३
'रअ' प्रमुख भ्रमणको रिजल्ट आइसक्यो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
'सामन्त गोयलको भ्रमणले रिजल्ट ल्याइसक्यो, हामी त्यहीँ अडिएका छौं ।उहाँ रअ प्रमुखका रूपमा नेपाल आउनुभएको होइन । प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी)को सन्देश लिएर आउनुभएको हो ।'
मंसिर १९, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — भारतीय जासुसी संस्था रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको विषय संसदीय समितिमा छलफलका लागि प्रवेश भएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाकै सांसद भीम रावल तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत गोयल र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको भ्रमणबारे प्रश्न गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जवाफ दिएका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरू पुरानै कुरामा अडेर बसेको भन्दै व्यंग्य पनि गरेका छन् । 'सामन्त गोयलको भ्रमणले रिजल्ट ल्याइसक्यो, हामी त्यहीँ अडेका छौं माननीयज्यूहरू,' उनले भने, 'उहाँ रअ प्रमुखका रूपमा नेपाल आउनुभएको होइन । प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी)को सन्देश लिएर आउनुभएको हो ।'
भ्रमण पारदर्शी नभएको भन्दै रावल र कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले थपे, 'कूटनीतिमा यस्ता खालको संयन्त्रहरू, माध्यमहरू प्रयोग हुन्छन् कि हुन्नन् माननीयज्यू ?'
नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढ हुने बाटोमा अघि बढ्यो : परराष्ट्रमन्त्री
दुई देशबीच सम्बन्ध तिक्त रहेको बेला अन्य विकल्प लगाएर छलफल हुने गरेको ज्ञवालीको भनाइ थियो । 'कहिले व्यापारी प्रयोग हुन्छन्, कहिले धार्मिक, सांस्कृतिक, नागरिक समूह प्रयोग हुन्छन्,' उनले थपे, 'नाकाबन्दी भएको बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई पठाएको होइन र ? त्यसकारण यसलाई (सामन्तकुमार गोयलको भ्रमण) ठूलो विषय बनाउनु पर्दैन ।'
'रअ' प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले राति सुटुक्क भेट्ने कुरा मिलेन : रावल
गोयलको भ्रमण अपारदर्शी भएको भन्न नमिल्ने ज्ञवालीको तर्क थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेको कुरा सार्वजनिक गरिएकाले त्यलाई अपारदर्शी भन्न नहुने ज्ञवालीको तर्क थियो ।
गोयलको भ्रमणपछि भारतीय सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे, विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलालगायतको भ्रमण भएकाले रिजल्ट आएकोतर्फ ज्ञवालीले संकेत गरेका हुन् । गोयलले भ्रमण गरेर फर्किएपछि भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे र विदेशसचिव श्रृंगला नेपाल आएका थिए ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ १२:१८
बगरभाइ भेट्रान्स फुटबल च्याम्पियन
बेन्जेमाका दुई गोलमा रियल विजयी
मिलान एटलान्टासँग पराजित
इंग्ल्यान्डमाथि श्रीलंका हाबी
एपीएफ अन्तिम चारमा, आर्मी पनि सेमिफाइनलमा